Ma dooneysaa Macaamiisha YouTube-ka ah oo bilaash ah & Xirmooyinka bilaashka ah ee YouTube-ka?
Miyaad dooneysaa macaamiil badan oo jecel kana qeyb qaadashada fiidiyowyada YouTube-ka? Gali Gali URL-ka YouTube si aad u gasho oo aad u bilowdo!
Hel Macaamiisha bilaashka ah ee YouTube hadda! or Iibso YouTube Subscribers
Hesho macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah, ama tijaabi macaamiishayada qaaliga ah, aragtida iyo jeceshahay xitaa kobaca degdega!
Saxeexidda & gelitaanka waxay qaadataa 30 ilbiriqsi!
Ku dhaqaaji qorshaheenna bilaashka ah ee bilaashka ah ama wax ku oolka ah, ama iskuday qorshe lacag leh.
Lasoco Channelkaaga Koray
La soco macaamiisha kanaalka iyo fiidiyowga jecel kordhinta!
Qorshayaasha Bilaashka ah iyo Bixinta
Qorshooyinka looguna talo galay iyo qiimeynta si loogu habeeyo baahiyahaaga
Macaamiishu waa haynta hoose
Wadada loo maro Pro
Macaamiishu waa haynta sare
On Wadada Soonka
15 Siyaabood oo Loogu Heli Karo Macaamiisha YouTube ee Bilaashka ah Ganacsigaaga
Ma ogtahay inay jiraan ku dhawaad ​​1.86 bilyan oo isticmaaleyaasha YouTube adduunka oo dhan sanadka 2021? 18% dadku waxay isticmaalaan YouTube gaar ahaan inay raacaan shirkadaha iyo summadaha.
Tirakoobyadan ayaa si cad u caddaynaya in haddii adiga oo ah milkiilaha meheradda aadan ka faa'iideysanaynin awoodda YouTube -ka, inaad lumineyso wax badan! Waxyaabaha ku jira fiidiyaha waa mustaqbalka. Waxay ku dadaashaa inay ka caawiso ballaarinta gaarsiintaada iyo dhisidda wacyiga astaanta. Laakiin tartan caynkan oo kale ah, sidee baad uga soocan tahay badweynta weyn ee waxyaabaha fiidiyowga ah ee si fudud loo heli karo?
Boggan, waxaan ku soo koobnay 15 talooyin iyo tabaha waxtarka leh si aan u helno macaamiil YouTube ah oo lacag la'aan ah si aad ganacsigaaga u gaarsiiso heerka xiga. Aan si toos ah u quusno!
1. Ka Codso Dhagaystayaashaada inaad Is -qorto
Iyada oo ay tani u ekaan karto, si fudud loogu dhiirri -geliyo dhagaystayaashaada inay iska -diiwaangeliyaan kanaalkaaga ayaa mararka qaarkood noqon kara wax walba oo ay qaadato si aad u hesho macaamiil YouTube ah oo lacag la'aan ah. Waxay aad ugu egtahay sida aad ugu darto CTA -yada (Wicitaanka Waxqabadka) dhammaadka dhejimahaaga baloogga, bogagga soo degga ama qoraallada kale ee warbaahinta bulshada.
Tusaale ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa fiidiyahaaga adoo weydiisanaya daawadayaashaada inay iska diiwaangeliyaan kanaalkaaga haddii ay rabaan inay si joogto ah kaaga arkaan waxyaabo badan.
Haddii aad u malaynayso bilaabista fiidyowga adiga oo weydiisanaya rukunsasho waxay kaa dhigaysaa inaad noqoto iib-y, waxaad samayn kartaa dhammaadka fiidiyaha. Ha iloobin inaad muujiso sababta kanaalkaagu u mudan yahay inaad iska qorto iyo waxyaabaha aad miiska u keento faa'idada daawadayaashaada. Noqo mid dhab ah oo tus waxa ka -qaybgalkoodu adiga kuu yahay iyo sida ay kaaga caawinayso inaad ka dhigto waxa ugu fiican ee abuuraha ah.
2. Abuur Mawduuc Adag
Tani waxay u ekaan kartaa mid aan caqli gal ahayn laakiin wali waxay u baahan tahay in la xuso. Aad u tiro badan oo abuurayaasha YouTube -ka ah ayaa dareensan inay noqon karaan dareenka xiga ee weyn ee YouTube iyagoo soo dhejinaya wax ku celcelis ah. Iftiiminta wararka: Ma awoodid! Internetka waxaa ku qulqulaya fiidyowyo iyo waxyaabo nooc kasta leh. Iyada oo ay jiraan xulashooyin badan oo aad kala dooran karto, waa inaad awood u yeelatid inaad u fidiso wax u gaar ah dhagaystayaashaada si ay u daawadaan kanaalkaaga oo aad iska qorto. Haddii kale, waxay had iyo jeer haystaan ​​ikhtiyaar ay ugu gudbaan kanalka ugu fiican ee xiga.
Xusuusnow inaad samayso asaas ballaaran kahor intaadan ka fikirin abuurista fiidiyahaaga xiga. Halkii aad dib u samayn lahayd waxa qof kasta oo kale oo ka mid ah warshadahaagu samaynayo, ka fikir sanduuqa oo la soo bax fikradahaaga nuxurka gaarka ah. Fiiro gaar ah sii 10ka ilbiriqsi ee ugu horreeya fiidiyahaaga maadaama ay soo jiidan karaan daawadayaashaada ama dib u dhigi karaan.
3. Noqo Mid Isku Oggol
Is weydii. Kanaalkee ayaad ka doorbidi lahayd inaad iska qorto? Mid bishiiba hal mar soo dhejisa oo kaliya si uu AWOL u tago? Ama, kanaal kale oo si joogto ah u dhajiya laba jeer toddobaadkii? Dhammaanteen waan ognahay jawaabta - waxaan doorannaa midka si joogto ah u cusbooneysiiya kanaalkooda oo leh waxyaabo cusub oo loogu talagalay daawadayaashooda. Abuuraha ahaan, dhagaystayaashaadu waxay kaa rajaynayaan inaad waqtiga ku dhejiso si aad uga dhigto kuwo ku hawlan oo soo jiidanaya daawadayaasha cusub sidoo kale. Inta badan macaamiisha YouTube -ka ah ee bilaashka ah, ayaa inta badan YouTube -ka bilaashka ahi jecel yahay inaad hesho. Guuleysta!
Haysashada jadwalka si aad u dhajiso waxyaabahaaga ayaa waliba kaa ilaalinaysa inaad abaabusho oo aad natiijooyin keento. Khasab kuguma aha inaad hor fadhiisato kombiyuutar si aad u noolaato oo aad u dhejiso. Waxaad adeegsan kartaa aaladaha maareynta warbaahinta bulshada ee kuu oggolaanaya inaad jadwal u sameysato fiidiyahaaga oo la daabici karo goor dambe.
4. Ka-tallaabso kanaalkaaga YouTube-ka Meelaha kale
Haddii aad hore u lahayd degel, hab wanaagsan oo lagu kasbado rukumada YouTube -ka bilaashka ah waa iyada oo laga faa'iideysto taraafikada joogtada ah ee degelkaaga. Ku dhiirrigeli kanaalkaaga YouTube -ka mareegahaaga. Haddii aad isticmaasho plugins -ka saxda ah, dhagaystayaashaadu waxay si fudud u riixi karaan badhan waxaana lagu hagaajin doonaa boggaaga YouTube si aad u aragto waxa ku jira. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ka fikirto gelinta xiriirintaada YouTube -ka ee dhejimahaaga baloogga si aad u soo jiidato akhristayaashaada inay soo booqdaan bogga.
Xeelad kale oo weyn ayaa ah iyada oo kor loo sii qaadayo kanaalkaaga YouTube-ka aaladaha kale ee warbaahinta bulshada sida Twitter, Facebook, Instagram iyo LinkedIn. Mar kasta oo aad haysato fiidiyow cusub oo soo socda, waxaad kula wadaagi kartaa trailer -ka ama qaybtiisa sheekadaada Instagram si aad u dhisto rajada. Haddii aad ku uruurisay tirooyin raacsan oo hagaagsan aaladahaan, oo ay jecel yihiin waxaad sameyso, waxay noqon doontaa waqti uun ka hor intaanay noqon macaamiishaada muddada-dheer.
5. Kudar Calaamadee Fiidiyahaaga
Abuurayaasha ku jira YouTube -ka waxay ku dari karaan summad -biyood yar dhammaan fiidiyowyada ay abuuraan. Inta badan hal -abuurayaasha nuxurka bilowga ah xitaa ma oga in ikhtiyaarka summaddu uu ka jiro madasha. Waa astaan ​​yar oo dul socota geeska midigta hoose ee fiidyowyadaada. Waxaad u beddeli kartaa summadaada sumadda ama waxaad adeegsan kartaa summad -u -eg oo u eg badhanka rukunka ee YouTube.
Nasiib darrose, marar badan summada summaddu waa la dareemi karaa ama uma soo jeedin karto daawadayaasha inay qaadaan tallaabo kasta. Waxaan kugula talineynaa inaad ku dhegto badhanka rukunka cas ee YouTube caadi ahaan adeegsado. Tani waxay u sahlaysaa daawadayaasha inay ogaadaan, waxayna u badan tahay inay gujiyaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad wali rabto inaad adigu is -beddesho, waxaad gujin kartaa Customization -ka menu ka dibna dooro Branding.
6. Ka -fiirso waxa soo socda
Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo macaamiisha YouTube -ka ee bilaashka ah waa iyada oo daawadayaashaada la kiciyo oo la qabatimo waxyaabaha aad samayso. Sababtoo ah, markay jecel yihiin waxay arkaan, shaqadaadu waxay samayn doontaa hadalka oo dhan, waxayna ku sii dhegi doonaan wax badan. Farsamooyin caqli badan oo abuurayaasha YouTube -ka aasaasay la geeyay si ay dhagaystayaashoodu ugu mashquulaan waa iyada oo la dhisayo fiidyahooda soo socda.
Fiidiyow muusig oo cusub, soosaarid alaab cusub, muuqaal cusub oo ku saabsan badeecadaada, adeeg cusub, ama xitaa iskaashi lama filaan ah oo lala yeeshay xiddig caan ah! Wax kasta ha ahaadee, xusuusnow inaad sasabto dhagaystayaashaada adoo siinaya tilmaam waxa fiidiyowgaaga xiga uu noqon doono. Haddii aad shaqadaada u qabato si ku filan, waxaad hubsan kartaa in daawadayaashaada daacadda ahi ay goobjoog ka ahaan doonaan si ay u daawadaan fiidiyaha soo socda oo neef leh oo ku siin doona YouTube -ka bilaashka ah.
7. Samee Liisaska Ciyaaraha si aad u ilaaliso Daawadayaashaada
Miyaad haysataa cajalado fiidyowyo ah oo si fiican loogu abaabuli karo liis -wadareed? Waxaa laga yaabaa inaad bixiso casharro xisaabeed oo aad hal mawduuc ku daboosho hal fiidiyow. Ama, waxaad leedahay gogosha webinars? Wax kasta oo ay noqon karto, liisaska liistadu waxay kuu oggolaanayaan inaad cagtaada ugu hormariso adigoo tusinaya daawadayaashaada inay sii socoto waxyaabahaaga. Adiga oo abuuraya liistada ciyaarta, waxaad ku hagaysaa safar dheer oo rafcaan u ah rabitaanka daawadayaasha ee ku aaddan.
Faa'iidada kale ee liisaska liisaska ayaa ah inay kordhiyaan waqtiga daawashada kanaalkaaga. Fiidiyowyadu waxay sii wadaan inay ku ciyaaraan habka 'AutoPlay' si hore loo sii qeexay. Tani waxay aad ugu egtahay sida jiilka kunka sano ay u egtahay inay ku xirmaan taxanaha Netflix. Markaad haysato liistada YouTube-ka, waxaad awoodi doontaa inaad ku guuleysato isla rabitaan badan iyo natiijo, adoo siinaya kanaalkaaga sababo badan oo aad ku urursan karto waxyaabaha YouTube ee bilaashka ah.
8. Adeegso Kaararka iyo Shaashadaha Dhammaadka si aad u dhiirrigeliso Fiidyowyada kale
Shaashadaha dhammaadka iyo kaararka ayaa ah aalado awood leh oo wicitaankaaga ficilka ka dhigaya mid saameyn badan leh. Sida magacu tilmaamayo, shaashadda dhammaadku waa sawir soo gala dhammaadka fiidiyahaaga kaas oo loo adeegsan karo in lagu weydiiyo daawadayaashaada inay is -qoraan. Ama, xitaa waad u adeegsan kartaa si aad kor ugu qaaddo degelkaaga ama aad ugu jeediso dhagaystayaashaada fiidiyaha xiga. Haddii aad rabto, waad ku noqon kartaa oo waxaad ku dari kartaa shaashadaha dhammaadka fiidyowyadii hore ee hore loogu dhajiyay kanaalkaaga. Kani waa hab wanaagsan oo lagu kasbado macaamiisha YouTube -ka ah oo lacag la’aan ah isla markaana kor loogu qaado waxyaabaha YouTube -ka jecel.
Si aad ugu darto shaashad dhammaad ah, si fudud u aad liiska bidix ee Abuuraha Studio oo guji Mawduuca. Dooro fiidiyaha aad rabto inaad ku darto shaashadda dhammaadka. Guji sanduuqa shaashadda dhammaadka oo ka muuqda dhinaca midig ee shaashadda. Waxaad markaa ka dooran kartaa afar qaybood oo kala duwan oo rukunka ah oo ku saleysan yoolalkaaga.
9. Ha iloobin inaad la falgasho Daawadayaashaada
Helitaanka YouTube -ka bilaashka ah waxay u baahan tahay dadaal joogto ah oo dhinacaaga ah. Ma ahan wax sahlan in lagu guuleysto daawadayaasha cusub marka loo eego tartanka aan maanta aragno. Habka caqliga leh ee arrintan looga shaqayn karo waa iyada oo la siiyo daawadayaashaada jira si isku mid ah. U oggolow inay dareemaan qiimayn iyo qaddarin si ay kaaga caawiyaan inaad noqoto abuuraha aad tahay. Ka qaybgal iyaga dhejintaada. Ka jawaab faallooyinkooda. Baro waxa ay jecel yihiin ama aysan ka helin fiidiyahaaga.
Markaad la samaysato cilaaqaad macno leh dhagaystayaashaada, waxay u tarjumaysaa daacadnimo muddo dheer ah. Markaad maqasho talooyinkooda oo aad wax ka qabato, waxay dareemaan in la maqlay oo waxay la xiriiraan waxyaabahaaga. Xusuusnow, daawadayaasha faraxsan waxay keeni karaan daawadayaal badan iyagoo ku dhawaaqaya afka-afka iyo la wadaaga waxyaabahaaga saaxiibbadooda.
10. Tixgeli Bandhigyada Channel -ka si aad u soo jiidato daawadayaashaada
Ma rabtaa inaad u oggolaato daawadayaashaada cusub inay ogaadaan waxa kanaalkaaga YouTube uu ku saabsan yahay hab fudud oo degdeg ah? Geli - Isjiidka Channel. Kuwani waa sida isjiidka filimada oo si qarsoodi ah u siiya waxaad sameyso iyo waxa aad u abuurto daawadayaashaada. Waxaad isticmaali kartaa isjiidjiyeyaasha kanaalka si aad u muujiso faa'iidooyinka kanaalkaaga. Xusuusnow inaad dhererka u dhexeyso 25 illaa 30 ilbidhiqsi.
Raad -raacuhu wuxuu gudbin karaa sheekada astaantaada, hamigaaga iyo waxa aad qorsheyneyso inaad ku gaarto kanaalka. Ma u baahan tahay dhiirigelin, qosol ama shucuur? Wax kasta oo adiga kuu shaqeeya oo ku raacsan khadkaaga shaqada. Ka dhig mid saameyn leh si daawadayaasha loogu rogi karo macaamiil si fudud.
11. Abuur Faraha yar-yar ee Indhaha soo jiidan kara
Sawir -gacmeedku waa sawir horudhac ah oo u shaqeeya daboolka fiidiyahaaga. Waa waxa ugu horreeya ee daawadayaashu eegi doonaan markay yimaadaan boggaaga. Dhammaanteen waan ognahay, dareennada ugu horreeya waa dareenka ugu dambeeya. Marka, geli dhammaan dadaalladaada si aad u abuurto sawir-gacmeed indho-jiidasho leh oo dhaafsiisan ka-qaybgalka. Badanaa, thumbnail -ka fiidiyahaaga ayaa noqda qodobka go’aaminaya haddii daawadayaashu doortaan inay ku ciyaaraan fiidiyowgaaga ama mid kale natiijada raadinta.
YouTube sidoo kale waxay u abuurtaa thumbnail -ka caadiga ah ee fiidyowyada iyadoo si fudud looga dhejinayo shaashadda aan kala sooca lahayn. Xaaladaha badankood, tani kuma filna inay waddo taraafikada fiidiyahaaga oo aad u sheegto daawadayaasha inay gujiyaan. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad abuurto thumbnail -kaaga Ha ahaato 1280 x 720px sida tilmaamaha YouTube ay ku taliyaan.
Talo Pro: Waji dhoolla -caddaynaya oo si toos ah u eegaya kaamirada ayaa u muuqata inay had iyo jeer u shaqayso nooc kasta oo fiidiyow ah.
12. Ku Dhiiri geli Daawadayaasha Haddii Ay Ku Dhiibaan Channelkaaga
Annagu bini -aadamku wuxuu jecel yahay walxaha xorta ah. 'Maxaa iigu jira?' Tani waxay sabab u noqotaa mararka qaarkood sababta aan wax u qaban karno ama aynaan u samayn karin. Waxaa la yaab leh, tani waxay u shaqeysaa sidii soo jiidasho si kor loogu qaado aragtidaada YouTube sidoo kale. Ma rabtaa inaad kordhiso jaceylkaaga YouTube ee bilaashka ah ama dad badan ay faallo ka bixiyaan boostadaada? Hab caqli leh ayaa ah in la tartamo. U sheeg daawadayaashaada haddii ay ku biiraan kanaalkaaga oo ay faallo ka bixiyaan boostadaada, waxay helayaan badeecad lacag la'aan ah. Ama, nuqul saxiixan oo buuggaaga ah, ama tijaabo lacag la'aan ah ee software -kaaga. Hel daloolin?
Markaad soo bandhigto abaalmarino ku lug lahaanshaha kanaalkaaga YouTube waxaad arki kartaa koror ku -meel -gaar ah tirada macaamiishaada iyo sidoo kale ka -qaybgalka guud. Markaad hesho fiiro gaar ah, ku soo jiid nuxur qasab ah oo joogto ah, si ay u noqdaan daawadayaashaada nolosha oo dhan.
13. La shaqee Abuurayaasha kale si kor loogu qaado Jecelka YouTube -ka ee Bilaashka ah
Waxaa laga yaabaa inay jiraan calaamado YouTube -ka ku jira oo isku ganacsi ah. Waxa kale oo suurtogal ah in aad yeelan karto dhagaystayaal la mid ah. Maxaa diidaya in midba midka kale daawadayaashiisa gacmaha is qabsado oo midba midka kale ka faa'iidaysto? Tusaale ahaan, waxaad weyddiisan kartaa khabiir ku xeel dheer goobtaada inuu kugu wareysto kanaalkaaga. Tani waxay gacan ka geysan doontaa keenista taageerayaashooda kanaalkaaga oo ay kobciso saldhigga macaamiishaada. Isla mar ahaantaana, daawadayaashaada oo aan ka warqabin khabiirka ayaa iska qori kara kanaalkooda sidoo kale haddii waxa ku jira ay la qabsadaan iyaga.
Wadashaqaynta saamaynta leh si ay u qabsadaan indho -indhayn badan kanaalkaaga ayaa laga yaabaa inay tahay khiyaamadii ugu da’da weyneyd ee buugga suuqgeynta weligeedna kuma guuldareysan inay ka shaqeyso sixirkeeda. Markay dhagaystayaashaadu arkaan iskaashiyada noocaas ah, waxay sii kicin kartaa talooyin badan ama fikrado maankooda ku jira. Waxaa laga yaabaa inay faallo ka bixiyaan qoraalladaada oo ay kuu sheegaan fannaaniinta kale ee ay jeclaan lahaayeen inay arkaan inaad la shaqeyso.
Hagaajinta Mashiinka Raadinta waxay hubisaa in dadku arki karaan waxa ku jira markay raadinayaan iyagoo adeegsanaya ereyo -fure qaarkood. Tusaale ahaan, waxaad YouTube ku leedahay kanaal wax lagu karsado. Waxaad abuureysaa fiidyow ku saabsan sanduuqyada la dubay. Sidee dadku u heli doonaan fiidiyowgaas haddii aadan hagaajinaynin cinwaankaaga, sharraxaadda oo aadan isticmaalin hashtag -yada ku habboon? Aaladaha SEO sida Qorsheeyaha Google ayaa kuu oggolaanaya inaad ogaato ereyada muhiimka ah ee ugu sarreeya ee dadku adeegsadaan si ay u helaan macluumaad gaar ah.
SEO -ga YouTube wuxuu hubiyaa inaadan fiidiyo ka samayn mawduuc aan cidina raadinayn. Ama magacyo aan cidina heli karin. Haddii aadan hubin sida loo helo ereyada muhiimka ah ee saxda ah adiga oo adeegsanaya aaladaha khadka tooska ah, baro kanaalkaaga tartame oo fiirso ereyada muhiimka ah ee u muuqda inay shaqeynayaan. Waxaad kaloo adeegsan kartaa Falanqaynta YouTube si aad u aragto ereyada muhiimka ah ee ku siinaya natiijooyinka ugu fiican.
15. Isku day YouTube Live
Fiidiyowyada tooska ahi waxay noqdeen isbeddel halkaan joogaya. Tiro sii kordhaysa oo ah barnaamijyada sida Instagram iyo Facebook ayaa helaya astaantan taas oo u sahlaysa sumcadaha inay ku soo degaan. Laga soo bilaabo fadhiyada xiisaha leh ee Q&A iyo webinarrada illaa casharrada tooska ah iyo bandhigyada wax soo saarka, waxaa jira waxyaabo aan tiro lahayn oo aad ka baari karto YouTube -ka tooska ah si aad u hesho macaamiil YouTube ah oo lacag la'aan ah.
Heerarka hawlgelinta iyo wacyigelinta astaanta ee aad ku dhisi karto fadhiga tooska ah ayaa ah mid aan la barbardhigi karin. Hadday tahay dareenka ceyriinka iyo dabiiciga ah ee fiidiyaha tooska ah ama hubin la'aanta iyo xiisaha waxa dhici doona, baahinta tooska ah ayaa mudan in la isku dayo. Ka hor intaadan noolaan, xusuusnow inaad maal gashato qalabka iyo nalalka habboon si fiidiyahaagu u ekaado xirfadle.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinka kor ku xusan ay si fiican u imaan karaan si kor loogu qaado astaantaada kanaalkaaga oo aad u hesho macaamiil YouTube ah oo lacag la'aan ah. Xusuusnow, ma jiro hal-cabbir-ku-habboon dhammaan hab-suuqgeynta fiidiyaha. Waa geedi socod barasho oo aad si tartiib tartiib ah u baratid waxa adiga kuu fiican iyo waxa aan kuu fiicnayn. Ujeedo inaad abuurto waxyaabo xiiso leh oo si joogto ah ugu dheji si aad u dhisto saldhig macaamiil oo daacad ah. Fiidiyowyada xarig ee isla set ee liistada liiska si loo fududeeyo sii wadista. U fiirso hagaajinta cinwaankaaga fiidiyaha, sharraxaadda iyo adeegsiga hashtags oo dad badan u soo jiidi kara waxyaabaha ku jira fiidiyahaaga.
Haddii suuqgeynta YouTube -ka ay u muuqato mid kugu adkaatay oo aad u baahan tahay caawimaad xirfadle, annaga, YTpals, waxaan joognaa adeeggaaga. Waxaan leenahay aalado iyo khibrad si aan kuugu helno jaceylka YouTube-ka bilaashka ah adoo kobcinaya macaamiishaada annagoo adeegsanayna xalalka SEO-ga ugu fiican iyo farsamooyinka warshadaha la xaqiijiyay.
Nala soo xiriir dhammaan baahiyahaaga suuqgeynta YouTube. Kooxdayada khubarada ah ee saaxiibtinimada leh ayaa ku farxi doona inay wax ka bartaan shuruudaha ganacsigaaga oo ay soo bandhigaan xalal dawaarle ah oo ku habboon baahiyahaaga.
Abuurayaasha waxyaabaha ku jira YouTube waxay la halgamayaan tiro badan oo abuurayaasha kale si ay u soo jiitaan dareenka daawadayaasha. Helitaanka saamiyada YouTube-ka ee bilaashka ah iyo faallooyinka YouTube-ka bilaashka ah way adkaan kartaa....
Abuurayaasha nuxurka YouTube waxay ku shaqeeyaan istiraatiijiyadooda SEO si ay kor ugu qaadaan tartamayaashooda oo ay u horumariyaan darajooyinkooda YouTube. Marka fiidyaha la kala sarreeyo, algorithmamka YouTube wuxuu kaloo qaataa daawade...
Adigoo ka faa'iidaysanaya ka-qaybgalka iyo beddelka awoodda nuxurka fiidyowga, waxaad furi kartaa suuqgeynta sumcadda weyn ee YouTube. Ahaanshaha mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, Google-ku leeyahay...
Waxaan iibsaday Muuqaalada YouTube-ka ah, Jaangooyada iyo Macaamiisha kanaalkayga waxayna iibiyeen wax walba oo lagu daray xoogaa gunno ah oo bilaash ah! Waxaan u isticmaali doonaa YTPals marar badan!
Waad ku mahadsan tahay YTPals
Waad ku mahadsan tahay YTPals, waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo 10 xiddigood. Waan ku jeclahay dhamaantiin, iyo shaqada cajiibka ah ee aad qabatid.
Ha shaki qabin hal ilbiriqsi!
YTPals, waad ku mahadsan tahay caawimadaada, waxaad kadhigtay mid ka mid ah kanaalkayga sedex jeer sida ay u weyntahay markii aan bilaabay dhaqdhaqaaqaaga bilaashka ah. Waxaan ka imid wax ka yar 100 Subs in ka badan 300 dhowr toddobaad gudahood!